Zhongshan Tauras Technologies Co., Ltd, na-agbaso echiche nke "iburu uru ndị ahịa dị ka etiti na ọrụ mmekọrịta dị ka ọrụ nke aka ya", na-eto ahụike na ike n'okpuru ịkọ ndị ọrụ niile jiri amamihe ha na sweats.
N'elu afọ iri abụọ na abụọ, Zhongshan Tauras na-ebili na mberede dabere na ike ya gbakọtara, ma na-etolite nwayọ n'ime ụlọ ọrụ site na mbukota R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ. Ugbu a ike R & D ya na-esikwu ike kwa ụbọchị, ikike imepụta ya na-eto kwa ụbọchị, usoro ọre ahịa ya na-etolite nwayọ, ọrụ teknụzụ ya ejiri nwayọ nwayọ, yana akụkụ ya niile rụzuru ọfụma.
N'ileghachi anya n'ọdịnihu, Chinese Ikanam ụlọ ọrụ ga-eche ihu ọzọ ohere na nsogbu. Zhongshan Tauras ga na-eme ihe ọhụrụ ma na-aga n'ihu na nyocha na teknụzụ, na-ewusi njikwa ike, na-ewu akara, wee na-ama mma.
Anyị ga-anọkọ ọnụ ma soro ndị enyi anyị niile nwee ike ịga echi nke ọma.
Onye isi na onye isi oche,
Zhongshan Tauras Teknụzụ Co., Ltd